Isikwele Esigoqekayo Esiqondile
Isikwele esigoqekayo esime mpo siwumqondo ofanayo neisikwele esivundlile esigoqekayo, enye inketho yakho ehlukile yokulungiselelwa kwemicimbi yakho.Kulula ukugoqa, ukugcina nokuthutha.Kusetshenziswa kakhulu ezifundweni ezahlukahlukene, emikhosini yasehlobo, nokukhushulwa kwemicimbi noma eminye imisebenzi.
Izinhlelo zokusebenza: Isikwele esigoqekayo esiqondile, sebenza njengohlaka olulodwa lwe-Sideline A, uphawu oluhle nesibonisi sokukhangisa semicimbi yezemidlalo, imibukiso yezohwebo, ama-parade nanoma yimiphi eminye imicimbi yasendlini.
Isikwele esigoqekayo esiqondile siwumqondo ofanayo nesikwele esivundlile esigoqekayo, enye inketho yakho ehlukile yokulungiselelwa kwemicimbi yakho.Kulula ukugoqa, ukugcina nokuthutha.esetshenziswa kabanzi ezifundweni ezahlukahlukene, emikhosini yasehlobo, kanye nokukhushulwa kwemicimbi noma eminye imisebenzi.
(1) Amabhanela angasonteka abe ngaphansi kwesigamu sosayizi wawo, ukuze agcinwe futhi ahambe kalula.
(2) Uhlaka olwakhiwe ngesigxobo esiyinhlanganisela esiqinile futhi esivumelana nezimo
(3) Isistimu ye-tension/amabhande aqhelelayo e-Velcro nhlangothi zombili nangaphansi/ gcina umfanekiso uphansi futhi uzinzile
(4) isisindo esengeziwe esisebenzayo (izikhonkwane, isikhwama samanzi, njll).
(5) Isethi ngayinye iza nesikhwama sokuthwala.
Ikhodi Yento Bonisa ubukhulu Usayizi wokupakisha
Okwedlule: Isikwele esigoqekayo esivundlile
Olandelayo: Isibhengezo Senyanga Eyingxenye